Iko karama, iko mmanya karama, mmanụ Glass karama - Changyou
Companylọ ọrụ anyị na-etinye uche nke ukwuu na imepụta ihe na modem iko na-aga n'ihu na usoro nhazi, anyị na Coca Cola, Pepsi-cola, Diageo na ụdị mmanya ndị ọzọ a ma ama. Ọ bụghị nanị na ọkọnọ na anụ ụlọ ahịa, anyị na ngwaahịa na-exported karịa mba 30 n'ụwa nile.
187ml ochie Green Glass Burgundy Bottle maka W ...
150ml tomato mado ketchup ọkụ ihendori 5 oz woo ...
Din 18 iko mkpa mmanụ karama na akara ...
Vodka gin wiski rum rọm iko karama na ...
Yantai Changyou Glass Co., Ltd nwere ihe karịrị afọ 18 na ịnye iko karama ngwaahịa na ngwugwu ngwugwu metụtara ya. Ngwa ndị bụ isi na-ekpuchi ụdị iko dị iche iche, gụnyere karama mmanya, karama oliv, karama biya, karama ịchọ mma, karama mmanya dị nro, ite nri, iko ọgwụ, wdg.
Companylọ ọrụ anyị na-etinye uche nke ukwuu na imepụta ihe na modem iko na-aga n'ihu na usoro nhazi, anyị na Coca Cola, Pepsi-cola, Diageo na ụdị mmanya ndị ọzọ a ma ama. Ọ bụghị nanị na ọkọnọ na anụ ụlọ ahịa, anyị na ngwaahịa na-exported karịa mba 30 n'ụwa nile. Anyị isi ahịa bụ North America, South America, Southeast Asia, Australia, Mid East, Africa, na na na…